Apple TV 3 na-enwetakwa mmelite na sistemụ ya | Esi m mac
Ternyaahụ bụ n'ehihie nke mmelite na ọ bụ nke ndị Cupertino kwalitere nsụgharị ọhụrụ nke tvOS, iOS na usoro watchOS, usoro ndị na-enweghị Mac nwere ngwaọrụ ndị ọzọ dị na ahịa.
Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ọrụ eju anya ịchọpụta na Apple emelitere ochie iOS 8 na mbipute iOS 8.4.2 maka Apple TV 2 na iOS 7 na mbipute iOS 7.2.2 maka Apple TV 2. Ọ bụ ezie na Apple akwụsịlarị ire Apple abụọ a. Modelsdị TV ha ekpebiela imelite sistemụ na-achịkwa ha, nke a na-eto ugbu a na net.
Apple abụghị nanị na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ọgbọ nke anọ Apple TV na usoro tvOS ọhụrụ na ọ bụ na ụnyaahụ ọ malitekwara mmelite maka ọgbọ nke abụọ na nke atọ Apple TVs. Ngwaọrụ ndị a adịworị na drawer nke ngwaọrụ ndị na-abaghị uru maka Apple, nke na-egbochighị ha ikpebi ịhapụ nsụgharị ọhụrụ nke sistemụ ha. na ndị ọzọ na-eweta a nche kwachie.
Dị ka anyị tụrụ anya tupu, emana nke abụọ Apple TV emelitere na mbipute ahụ iOS 7.2.2. na Ọgbọ nke atọ Apple TV ka mbipute iOS 8.4.2. N'ụzọ dị otú a, Apple na-ahụ na nkeji niile nke ngwaọrụ ndị a na-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu ma na-ekpuchikwa ọnụ nke ndị kwenyesiri ike na Apple TV 2 na 3 nwụrụ mgbe ọgbọ nke anọ Apple TV bịarutere.
Enwere m ngwaọrụ atọ niile n'ụlọ ma enwere m Apple TV 3 n'ime ime ụlọ na ọgbọ nke anọ Apple TV n'ime ime ụlọ ahụ, na-ahapụ Apple TV 2 ugbua na nchịkọta nke ngwaọrụ Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple TV 3 na-enwetakwa mmelite sistemụ
Ndi enye ada ọwọrọiso etop ekededi? Ọ bụrụ na ọ bụghị oke oke ị jụọ otu i si eji ihe atọ a eme ihe, maka gịnị? Enwere m n'uche ijide anọ mana ịnwe atọ ahụ .. .. M na-ejikarị ya iji nweta NAS Synology ... ntakịrị ihe nkwụsị iji kwụsị njedebe Krismas a ???
Enwere m atv3 n'ime ụlọ. na ios 6.x na-arụ ọrụ zuru oke dị ka ụbọchị mbụ, na-eme otu ihe maka nke a zụrụ ya: airplay na ịgbazite ihe nkiri
Apple weputara nsụgharị ikpeazụ nke macOS Sierra 10.12.2